Heerka ribada oo aan wax laga bedelin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stefan Ingves, guddoomiyaha bangiga qaranka. sawir: TT
Heerka ribada oo aan wax laga bedelin
La cusbooneeyay onsdag 20 december 2017 kl 11.30
La daabacay onsdag 20 december 2017 kl 10.10
Bangiga qaranka ayaan wax is-bedel ah ku sameeyn heerka ribada inkasta oo uu dalku ku sugan yahay xaalad dhaqaale oo kobceeysa. Hoggaanka bangiga qaranka ayaa ku qiimeeyey in tallaabadan loo baahan yahay si loo dhiiri-geliyo kor u kaca sicir-bararka.
Ribada ugu muhiim-san ee dhaqaalaha reporäntan ayaa loo daayey heerkii ay horay u taagnayd -0,5%, sida uu qoraal saxaafadeed ku baahiyay hoggaanka bangiga qaranku.
Kor u kaca sicir-bararka ayaa ku sugnaa ku dhowaad 2%, ahna goolka uu hiigsanayay bangiga qaranku, hase yeeshee hoggaanka bangiga ay ula muuqatay in weli loo baahan yahay in dhiiri-gelin lagu sameeyo nidaamka dhaqaalaha si uu sicir-bararku u gaaro heerka goolka lala hiigsaneyo.
Hoggaanka bangiga qaranka ayaa qiyaasaya in kor u qaadis lagu sameeyn doono nidaamka ribada inta lagu guda jiro sannadka foodda innagu soo haya ee 2018. Hase yeeshee uu nidaamka ribadu ku sugnaan doono naaqus (minus) illaa iyo sannadka 2019 – sida uu iminka qiyaasayo hoggaanka bangigu.